မွေးဖွားသည့်နေ့ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၂၈
မွေးဖွားသော သက္ကရာဇ်နှင့် နန်းစံနှစ်
အလောင်းစည်သူမင်းသည် ပုဂံမင်းဆက် (၅၅) ဆက်၏ (၄၅) ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်၍ သမိုင်းမှတ်တမ်း အခိုင်အမာကျန်ရစ်သော အနော်ရထာမင်းမှ စတင်ရေတွက်သော် တတိယမြောက် ပုဂံဘုရင်ဖြစ်သည်။ အလောင်းစည်သူမင်းကို စောလူးမင်း ၏သားတော် စောယွန်းနှင့် ကျန်စစ်သား၏ သမီးတော် ရွှေအိမ်သည်တို့မှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၂၈၊ အေဒီ ၁၀၆၆ တွင်ဖွားမြင်သည်။  ထိုမင်း၏ နန်းစံနှစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးမြန်မာရာဇဝင်များဖြစ်သော မဟာရာဇဝင်၊ တွင်းသင်းရာဇဝင်သစ်၊ မှန်နန်းရာဇဝင်၊ ဇာတာတော်ပုံ ရာဇဝင်တို့တွင် အကွဲကွဲအပြားပြား ဆိုထားကြသည်။ ဦးကုလား မဟာရာဇဝင်တွင် မြန်မာနှစ် ၄၅ဝ (အေဒီ ၁ဝ၈၈)၊ တွင်းသင်းရာဇဝင်သစ်တွင် မြန်မာနှစ် ၄၅၅ (အေဒီ ၁ဝ၉၃)၊ မှန်နန်းရာဇဝင်တွင် မြန်မာနှစ် ၄၅၄ (အေဒီ ၁ဝ၉၄)၊ ဇာတာတော်ပုံရာဇဝင် မြန်မာနှစ် ၄၇၃ (အေဒီ ၁၁၁၁) ဟု အလောင်းစည်သူမင်း၏ နန်းစံနှစ်ကို အသီးသီး တွေ့ ရပါသည်။ ကျောက်စာများတွင် တွေ့ ရသော အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘွဲ့ အမည်မှာ ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျပဝရဓမ္မရာဇာ ဖြစ်၍ ဤဘွဲ့ မျိူးကို စတင်ခံယူခဲ့သူ သူ၏ အဘိုး ကျန်စစ်သားမင်း၏ ဘွဲ့ နှင့် "ပဝရ" ဟုသော နာမဝိသေသနပုဒ်သာ ထူးခြားကြောင်း တွေ့ ရသည်။ ခေတ်သစ်သမိုင်းဆရာများက နှောင်းခေတ် စည်သူဘွဲ့ ခံမင်းများနှင့် ခြားနားစေရန် စည်သူ-၁ ဟု အလောင်းစည်သူမင်းကို ခွဲခြားသုံးနှုန်းကြသည်။  အလောင်းစည်သူမင်းသည် အေဒီ ၁၀၆၆ တွင်ဖွားမြင်သူဖြစ်ရာ ပုဂံထီးနန်းကို ဆက်ခံချိန်တွင် သက်​တော် (၂၆) နှစ်မျှသာရှိသေးသည်။
အမည်ကွဲ (၇) မျိုး
အလောင်းစည်သူအား ဖွားမြင်သောအခါ ဥကင်သတံခါးလည်း သူမဖွင့်ဘဲ ပွင့်သည်။ အိမ်ရှင်စည်ကြီးလည်း သူမတီးပဲ အလိုလိုမြည်သည်။ မင်းသားလည်း ဖွားသည့်နေ့မှစ၍ ပြင်းပြစွာ မဆိတ်မညံငိုသည်။ ထီးလှိုင်ရှင် မင်းကြီးလည်း မြေးတော် ငိုသောအကြောင်းကို ဟူးရားဖြူ ဟူးရားညိုတို့အား မေးတော်မူ၏။ ဟူးရားဖြူ ဟူးရားညိုတို့လည်း မြေးတော်သည် တိုင်းကားနိုင်ငံ အပိုင်းအခြားကို သိလို၍ ငိုပါသည်ဟု နားတော်လျှောက်၏။ ထိုအခါ ထီးလှိုင်ရှင် ကျန်စစ်သားမင်းလည်း နိုင်ငံအပိုင်းအခြားကို ရွှေပေတွင် ရေးစေ၍ ဖတ်လျှောက်မှ ငိုသံဆိတ်သောဟူ၏။ ထိုသို့ အံ့ဖွယ်သူရဲကို ဘိုးတော်မြင်လျှင် ငါ့မြေးတော်နန်းကို ငါစောင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်ဟူ၍ မိန့်တော်မူပြီးသော် မြေးတော်ကို ရင်ခွင်၌ပိုက်လျက်ရာဇပလ္လင်ထက် တင်၍ သီရိဇေယျသူရဟူသော အမည်နှင့် ဘိသိက်သွန်း၍ မင်းမြှောက်တော်မူသည်။ စည်သူ ဟုသော အမည်မှာ ဇေယျသူရ မှ ပြောင်းလဲလာသော အမည်ဖြစ်သည်။
မိဖုရားများ၊ သားတော်သမီးတော်များနှင့် ဆွေမျိုးအဆက်နွယ်များ
အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးကိုသာမဟုတ်၊ သာသနာရေးကိုလည်း လျစ်လျူမရှုခဲ့ပေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာ၌ သာသနာ့ အဆောက်အအုံများကို ပြုစု တည်ဆောက်စေခဲ့ရုံမက နိုင်ငံတွင်း အနှံ့အပြား၌လည်း စေတီပုတိုး ဂူကျောင်း စသည်တို့ကို တည်ထားခဲ့သည်။ မင်းတရားကြီး၏ ထင်ရှားသော ကောင်းမှုတော်တို့မှာ ပုဂံတွင် ရွှေဂူကြီးဘုရား၊ သဗ္ဗညုဘုရား၊ အညာတွင် သရက္ခန်စေတီတော်များ၊ ကျော်လေးဆူအဝင် သီဟတောဘုရား၊ ပခုက္ကူ ရွှေဂူကြီးဘုရား၊ သီဟိုဠ်ရှင်ဘုရား၊ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားများ၊ စစ်ကိုင်း ရှင်ဖြူ၊ ရှင်လှဘုရားနှင့် မုဌောဘုရားများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရွှေဂူကြီး ဘုရားနှင့် သဗ္ဗညုဘုရားတွင် ကြေးစင်တစ်သောင်းသွန်းသော ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်လုံးစီ သွန်းလုပ်လှူဒါန်းတော်မူခဲ့ကြောင်း သိရပေသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ၌မူ ယင်းခေါင်းလောင်းကြီး များကို မတွေ့ ရတော့ပေ။ သဗ္ဗညုဘုရားကြီး၏ အရှေ့ တောင်ဖက်တွင်မူ ကြီးမားသော ခေါင်းလောင်းတိုင် အကြွင်းအကျန်နေရာကို ယခုထိတွေ့ နိုင်ပါသေးသည်။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် မင်းဘူးစက်တော်ရာကို သွားရောက် ဖူးမြော်ပြီးသောအခါ ကျောင်းတော်ရာစေတီကိုလည်း ပြုစုတော်မူခဲ့သည်။
အလောင်းစည်သူမင်းကြီး၏ ကောင်းမှုတော်များတွင် ရွှေဂူကြီးဘုရားနှင့် သဗ္ဗညုဘုရားကြီးမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတော် ရွှေဂူကြီးဘုရားကို ၁၇ မေ၊ ၁၁၃၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထားခဲ့၍ ခုနှစ်လအကြာ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၁၃၁ တွင်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရွှေဂူကြီးဘုရားသည် နန်းတော်ဦးတွင် တည်ရှိသဖြင့် နန်းဦးဘုရားဟု၍ အမည်တွင်သည်။ ရွှေဂူကြီးတည်ထားခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောက်စာနှစ်မျက်နှာရေးထိုးထားခဲ့ပြီး ဂူဘုရား၏ ဝင်ပေါက်တစ်ဖက်စီတွင် တည်ရှိသည်။ ကျောက်စာကို ပါဠိဘာသာဖြင့် ဂါထာပေါင်း ၁၀၀ ရေးသားထား၍ အဆုံးတွင်မူ ရက်စွဲမှတ်တမ်းကို သက သက္ကရာဇ်ရက်စွဲသုံး၍ သက္ကတဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသည်။ ပုဂံခေတ်မှတ်တမ်းကျောက်စာများတွင် သက သက္ကရာဇ်သုံးစွဲ၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသောကျောက်စာ ဖြစ်သည်။ ကျောက်စာရှိ ပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးထိုးထားသော အကြောင်းအရာမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်များစွာကို ဂါထာအဖွဲ့အနွဲ့ဖြင့် သီကုံး၍ချီးကျူးကော်ရော်ထားခြင်းဖြစ်ကာ နောင်အခါတွင် မိမိလည်း သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်လိုကြောင်း ဆုတောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေးသားထားသော ပါဠိဘာသာ စီကုံးရေးဖွဲ့မှု အဆင့်အတန်းမှာ အထူးမြင့်မားကြောင်း ပညာရှင်များ ဆိုထားကြသည်။
သန်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ။ ပုဂံခေတ်နိုင်ငံရေး။ ရန်ကုန်၊ ယုံကြည်ချက်စာပေ၊ ၂၀၀၅။
တင်နိုင်တိုး၊ ပုဂံမင်းဆက်ရာဝင်၊ ၉၇။
မဟာရာဇဝင်-၁၊ ၁၉၀။ တွင်းသင်းရာဇဝင်-၁၊ ၁၁၆။ မှန်နန်း-၁၊ ၂၈၆။ ဇာတာတော်ပုံ၊ ၄၀။
သန်းထွန်း၊ ပုဂံခေတ်နိုင်ငံရေး၊ ၅၁.
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ-၁၄။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၅။ ၂၇၃-၂၇၅။
ဦးကုလား၊ မဟာရာဇဝင်၊ ၁၉၀-၂ဝ၄။
တင်နိုင်တိုး၊ ပုဂံမင်းဆက်ရာဇဝင်သစ်၊ ၉၉။
G.H. Luce, Old Burma-Early Bagan, vol. 1, text (New York: New York University, 1969), 85.
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၃) သုံးဆဲ့ခုနှစ်မင်း